Gbasara Anyị | Hebei Yangan Imp. Na Gwa. Co., Ltd.
Ọrụ aka na-arụ ọrụ
Ihe osise na ndụ jikọtara oge niile
Afọ iri anọ na abụọ
ahụmahụ nke mmepụta
Afọ iri abụọ na atọ
ikike imewe onwe
Ọchịchị 13 mba
oru ga-emezu n'ụzọ zuru oke
100% oru nkwado
na ọrụ na-esote mgbe niile
Ọrụ Atisan na-akụzi ihe nka, na-agbasawanye ọrụ ọdịnala ọdịnala yana ịkọ akụkọ ihe mere eme karịa afọ 42.
Anyị factory onwem na oge a noo na kere ụrọ nlereanya aghụghọ. Anyị factory tumadi na-agba dị iche iche ihe osise, dị ka isi iyi, gazebos, fireplaces, awụ, ogidi, okooko osisi, reliefs, ụkpụrụ ụlọ ọcha, ochie metal ngwaahịa, nkịtị sculptures maka ubi mma, ime ụlọ & n'èzí ịchọ mma na architectures, karịsịa maka ezigbo ala na ụlọ, wdg
Anyị nwere ndị ọkachamara na ndị omenkà, anyị nwere ike ịhazi ọsịse ọ bụla dabere na atụmatụ gị ma ọ bụ ihe ị chọrọ. Anyị dị mma na ọrụ aka ọdịnala, ihe osise ọdịda anyanwụ na ngwaahịa ndị nwere echiche ọdịda anyanwụ.
Anyị ụlọ ọrụ na-agwakọta omenala omenkà mmụọ na nke oge a na-atụ nkà na ụzụ, na-aghọta zuru okè Nchikota nke omenala atụ ihe art na nnukwu-ọnụ ọgụgụ mmepụta. Iji n'ihu na-akwalite internationalization nke ọkpụkpụ, anyị ụlọ ọrụ bịanyere aka imekọ ihe ọnụ nkwekọrịta na The Academy nke Ọma Arts nke Hebei Normal University na North China Institute of Electric Power, nke ghọworo "usoro nkuzi nkuzi" nke Academy. Na 2013, n'okpuru nduzi nke Prọfesọ Lin Hong, onye ọkà mmụta nke The Petrov Academy of Arts and Sciences of Russia, M ike m nnyocha na mmepe na imewe ike, na ọtụtụ usoro nke ọrụ m mere merie ndibọhọ enọ na otuto na njem.
Na-agbaso echiche nke Ọkpụkpụ ọla bụ Wonderful Life, anyị na-eji nkà anyị eme ihe ọ bụla ma anyị nwere olileanya na onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ obi ụtọ na ịma mma site n'aka ha.
Dabere na echiche pụrụ iche nke onye nrụpụta anyị, usoro nhazi ọdịnala anyị, na ụzọ ntụgharị emelitere, ị nwere ike nweta ọmarịcha ihe osise pụrụ iche.
Anyị nghazi: nkà na ndụ agwakọta n'ụzọ zuru okè mgbe niile. Inwe ọmarịcha ọrụ aka ọdịnala na imepụta ọgbara ọhụrụ iji weta mmụọ nka na mmụọ nka na ụwa. Ihe osise a na-ese ihe osise na-agụnye ihe ịchọ mma, ihe osise ọchịchị maka ogige & ogige mma na ịzụlite ọdịbendị na okike.
Nzube anyị: Ahịa ihu factory. Ndị ahịa nwere ike ịnweta nka na ihe osise kachasị afọ ojuju na ọnụahịa kacha mma. Ahịa nwere ike ịgbanwe echiche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ozugbo na kpamkpam. Site n'ụzọ a, ihe osise ọ bụla ikpeazụ nwere ike ọ bụghị naanị ime ka ndụ maa mma, kamakwa ka echekwa ya dị ka ama akụkọ ihe mere eme.